ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ၊ မေ - ၉
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း သည် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Hong Liang ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ တပ်မတော်ကလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများချုပ်ငြိမ်းပြီး တည်ငြိမ် အေးချမ်းစွာဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ပစ်ခတ်မှုမရှိဘဲ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ အစိုးရနှင့်တပ်မတော်ထံ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် ဒေသခံ ပြည်သူလူထုများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် တစ်ဖက်သက်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက် မှုရပ်ဆိုင်းပေးထားမှုအခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည် အဖွဲ့ဝင်များ နှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော ၊ မေ - ၉
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး သညျ ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Hong Liang ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး)နှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံအစိုးရနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးစှာ ဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကိစ်စရပျမြား၊ တပျမတျောကလကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခမြားခြုပျငွိမျးပွီး တညျငွိမျ အေးခမျြးစှာဖွငျ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိအောငျ ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ပဈခတျမှုမရှိဘဲ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားမှ အစိုးရနှငျ့တပျမတျောထံ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးမှုမြား ပွုလုပျနိုငျရနျနှငျ့ ဒသေခံ ပွညျသူလူထုမြား၏ အကြိုးစီးပှားအတှကျ တပျမတျောအနဖွေငျ့ တဈဖကျသကျပဈခတျ တိုကျခိုကျ မှုရပျဆိုငျးပေးထားမှုအခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ နယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေး နှငျ့ ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ကွညျး)နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့သညျ အဖှဲ့ဝငျမြား နှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျး ဓာတျပုံ ရိုကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။